How Long Does the Coronavirus Live on Surfaces? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » How Long Does the Coronavirus Live on Surfaces?
Posted by kai on Apr 15, 2020 in Arts & Humanities, Contributor, Columnist, Editor's Choice, Myanmar Gazette |0comments
တခြို့ မွနျမာလိုရေးထားတာတှမှော.. အထောကျအထားမရှိရေးတငျထားတာတှတှေေ့လို့.. အပငျပနျးခံ.. ပုံဇယားလေးလုပျပေးလိုကျပါတယျ..။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈတညျနိုငျတဲ့နရောတှနေဲ့.. ရှိနနေိုငျတဲ့ အခြိနျနာရီပါ..။
ကိုရှဗေိုငျးရပျဈကို အထငျမသေးပါနဲ့.. လထေဲကလှဲလို့နရောအကုနျလိုလိုမှာ.. တရကျကြောျနနေိုငျတာခညြးျပါ…။ အဲဒါကွောငျ့.. အပွငျသှားပွနျလာရငျအဝတျအကုနျခြှတျခြ.. လြှောျစကျထဲထညျ့(လကျနဲ့တောငျတတျနိုငျရငျမလြှောျရ)… အပူပေးအခွောကျခံပွီးမှ ပွနျသုံးပါတဲ့..။ လူလညျးဆပျပွာနဲ့တိုကျရခြေိုးပါ..။
ဗိုငျးရပျဈဟာ.. အဆီတမြိုးနဲ့ ပူးကပျဖှဲ့စညျးထားတာမို့.. အရကျဆိုရငျ..ပေါကျထှကျပြောျကတြာမို့ ပကြျဆီးပါတယျ..။ ဆပျပွာဆို..အဆီကိုဖြောျခလြိုကျတာမို့.. တပိုငျးတစစီဖွဈပကြျဆီးပါတယျ..တဲ့..။ လူ့ခန်ဓာထဲရောကျလာပွီဆို.. သူ့မှာပါတဲ့အခှံကိုခြှတျခပြွီး.. လူ့ဆဲလျနဲ့ပေါငျး ကိုယျထဲမွုတျဝငျလိုကျတာမို့.. အပွငျလောကမှာရှိစဉျကသတျလို့ရတာတှေ..ဘာမှမလုပျနိုငျပါ..။
လူ့ကိုယျထဲမှာ.. အရကျသောကျလို့.. ဗိုငျးရပျဈမသတေော့ပါ..။
အူတှအေသညျးတှထေုတျ.. အဝတျလြှောျစကျထဲထညျ့လြှောျလညျး.. ဟီးဟီးပါပဲ..။
မီးတငျရှို့လညျး လူမီးလောငျပွာကမြှ.. ဗိုငျးရပျဈသပေါမယျ..။ ဗိုငျးရပျဈကိုသတျလို့ရတုံးသတျပါ…။
ပူးကပျပွီးမှတော့.. .. ဘိုးဘိုးအောငျလညျးကယျမရ..။
အောကျကဝကျဘျဆိုကျတှေ.. မီဒီယာတှေ.. ပညာပေးဖိုရမျတှကေိုမှီငွမျးထားတာပါ..။
Ref: https://www.usatoday.com/in-depth/news/2020/03/25/coronavirus-survives-on-metal-plastic-cardboard-common-objects/2866340001/ –